Guddoomiyaha cusub ee Barlamaanka Jubbaland oo ka hadlay doorashadiisa – Radio Daljir
Abriil 29, 2015 3:05 b 0
Arbaco, Abriil 29, 2015 (Daljir) — Xildhibaannada baarlamaanka maamulka Jubba ayaa shalay doortay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen; kaddib kulan ay ku yeesheen xildhibaannadu xarunta caymiska ee magaalada Kismaayo.
Kulanka doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka KMG ah Jubblanad ayaa waxaa soo xadiray 72 xildhibaano oo ka mid ah 77-ka xildhibaan ee uu baarlamaanku ka kooban yahay.
Xilka guddoomiyaha oo ay isku soo sharraxeen afar xildhibaan ayaa laba ka mid ihi waxay ka tanaasuleen murashaxnimadooda intii aysan doorashu billaabin, iyadoo ay tartameen laba xubnood, iyadoo uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka, Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan.
Waxaa isna guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland loo doortay Cabdi Baaley, inkastoo uu daneynayay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland.Gudoomiyaha cusub ee barlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdirahmaan ayaa sheegay in la bilaabo doono kalfadhiyada cusub ee barlamaanka Jubbaland dhawaan.
Madaxweynaha Jubba, Sh. Axmed Madoobe oo goob-joog ka ahaa doorashada guddoonka baarlamaanka Jubbaland ayaa bogaadiyay sida ay doorashadu u dhacday, isagoo xusay inay soo dhaweynayaan mas’uuliyiinta maanta la doortay.